विविध Archives - Page 13 of 24 - Saptakoshionline
बडादशैं अन्तर्गत नवरात्रको छैटौ दिन आज घर–घरमा कात्यायनी माताको पूजा गरिँदैछ । आजको दिन कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग, शोक, भय, दुःखजस्ता संकट नाश हुने धार्मिक विश्वास छ। देवकार्य सिद्ध गर्नका लागि माता भवानी स्वयं कात्यायन ऋषिको आश्रममा पैदा भएको जनविश्वास छ। शक्तिशाली सिंहमा चढेर देवी कात्यायनीले दानवको बध गरेको ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। घटस्थापनादेखि नवमीका दिनसम्म हरेक दिन दुर्गा भवानी...
छोराछोरीको परीक्षाको परिणाम आएको दिन अभिभावकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आठ कुरा
आफ्ना सन्तानको स्वभाव र मनस्थितिबारे अभिभावकहरू परिचित हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ उनीहरू सतर्क हुनुपर्छ। तनाव उच्च हुने सम्भावना भएका बेला अभिभावकहरू चनाखो हुनुपर्छ। छोराछोरीको परीक्षाको परिणाम आएको दिन कसरी व्यवहार गर्ने त? १. अन्य बालबालिकाहरूसँग तुलना नगर्नुहोस् तपाईंले आफ्ना साथी, नातेदार, सहकर्मी, दाजुभाइ आदिबाट तिनका छोराछोरीले एसईईमा वा १०+२ मा ल्याएको नतिजाबारे थुप्रै कुरा सुन्नुहु...
झुक्किएर पनि घरमा आउनु नदिनुस् यस्ता चिज, पुग्छ ठूलो हानी
वास्तुशास्त्रका अनुसार केही वस्तु र चिज घरमा रहने शुभ र अशुभ हुन जान्छ । यस्ता चिज र वस्तुहरुलाई घरमा राख्ने कि नराख्ने भन्न जान्नका लागि वास्तुशास्त्रबारे ज्ञान हुन जरुरी छ । तपाईले घरमा राखिरहेको वा वेवास्ता गरेको केही वस्तु पदार्थका कारण तपाईको घरमा अशान्ति, दुःख, कष्ट पनि भएको हुन सक्छ । त्यसैले घरमा केही वस्तु छ भने त्यसलाई तत्काल हटाउन पर्दछ । चमेरो– यदि तपाइको घरमा चमेरो आउँदछ भने त्य...
दिपेन्द्र लामा निर्देशित फिल्म ‘छ माया छपक्कै’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दैै फिल्म युनिटले ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो। ट्रेलर हेर्दा फिल्ममा दिपकराज गिरी विद्यार्थी नेता र केकी अधिकारी नर्सको भूमिकामा देखिन्छिन्। ट्रेलरले राजनीतिसँगै यि दुईको प्रेमलाई छोएको छ। ट्रेलरमा केदार घिमिरे, जितु नेपाल, सुपुष्पमा भट्ट, शिशिर बाङ्देल, प्रकाश घिमिरे लगायत कलाकार पनि देखि...
मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेर ऐन बन्ने हो भने नेपालमा पत्रकारिताको अस्तीत्व समाप्त नै हुने थियो तर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका पत्रकारितासंग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरूको सजगता र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही सांसदहरूको पहलमा मिडियालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्छ भन्ने पवित्र भावनाका साकार हुने स्थिति देखिएको छ । यसकारण काउन्सिल विधेयक संशोधन हुन लागेको छ । काउन्सिल वि...
सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले एउटा नयाँ मेसेजिङ एपको निर्माणमा काम गरिरहेको छ । उक्त एपको माध्यमले प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो नजिकका साथीहरुसँग अधिक जानकारी शेयर गर्न सक्नेछन् । उक्त एपको नाम Threads हुने बताइएको छ । इन्स्टाग्रामको सिस्टम एपको रुपमा यो मेसेजिङ एपलाई फेसबुकले पेश गर्ने द भर्जमा प्रकाशित एक रिपोर्टमा उल्लेख छ । थ्रेड एपलाई यस्तो प्रकारले डिजाइन गरिएकेा छ कि जसमा इन्स्टाग्राम प्रयोगक...
सरकारले अनलाइन सपिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइट प्रयोग गरी सञ्चालन भइरहेका अनलाइन सपिङले उपभोक्ता ठगेको गुनासो बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको विकास र उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७६ मार्फत विद्युत् र वेवसाइडमार्फत हुने व्यापारिक गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेक...
सुनको मूल्य पुनः बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा एक हजार रुपैयाँले बढेर ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । साताको पहिलो र दोस्रो दिन छापावाला सुन तोलाको ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ७० हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा आठ सय ३५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
बेलका , बेलका नगरपालिका २ बस्ने वर्ष १७ कि कक्षा १० मा अध्ययनरत सोनिमा घिमिरे (शोभा) केही दिन देखी (ARDS) रोगबाट ग्रसित चाइना । उनको विराटनगरको विराट नर्सिङ्ग होममा १५ दिनदेखि भेण्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ । हाल उनको उपचार खर्च जुटाउन परिवारले नसक्दा बेलकाका युवाहरुले साथ दिएका छन । युवाहरुले सयुक्त रुपमा भेला भई सोनिमा घिमिरे ९ शोभा ० बचाउ अभियान को नाम दिएर रकम संकलन गर्दै हिडिरहेको बेलका युव...
नेपाली बजारमा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ।सोमबार सुन तोलामा १५ सय रुपैयाँले बढेर अहिलेसम्मकै उच्च कायम भएको हो। सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुन तोलामा १५ सयले बढेर ६७ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार सुन तोलाको ६६ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि सामान्य वृद्धि भएको छ।चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।आज चाँदी तोलामा ७९५ रुपै...